La Niña waxay imaan kartaa deyrta waxayna sababi kartaa jahwareer cimilo | Saadaasha Shabakadda
El Niño ka dib, ka soo horjeedkiisa ayaa yimid: Gabadha, taas oo ah dhacdo dabiici ah oo qaboojisa biyaha badda Baasifigga isla markaana wax ka beddeleysa cimilada adduunka ... laakiin si yar uga duwan. Goorma ayey imaan kartaa? Marka loo eego NOAA, waxaa jirta fursad ah 75% in qaab-hawleedkan uu soo bixi doono xilliga dayrta.
Heerkulka dusha sare ee Baasifigga ee u dhow dhul-badeedku wuu kari karaa ka hooseeya in ka badan 0,5ºC, sidaasna u doorbiday sameynta duufaanno ka dhaca Badweynta Atlantik.
La Niña waa dhacdo aan Elniño ka duwanayn, isla markaana aan waxyeello u geysanayn sida aad u maleynaysid, laakiin waxa keenayaa waa muhiim. Ma ahan mid aad u daran, laakiin waa inaad u diyaar garowdaa. Badweynta Baasifigga waxay lahaan doonaan qabow iyo jiilaal qabow, taasina waxay dhibaato ku tahay deegaannadaas oo roobabkii xilliyadii ugu dambeeyay aan wax badan lagu arkin, sida California. Dhanka kale, iyo sidii aan bilowgiiba ku sheegnay, badda Atlantic dhexdeeda waxaa ka jiri doona dhaqdhaqaaqyo duufaanno badan, taas oo, laga yaabo inay gaarto Spain, taasna ha sheegin roobabku waxay aad uga sarrayn doonaan sida caadiga ah Aasiya, Ustaraaliya iyo xitaa Koonfur Afrika.
La saadaalin karaa La Niña? Runtu waxay tahay maya, laakiin waa la ogyahay in 2dii ama toddobadii sanaba mar ay soo muuqan karto, had iyo jeer ma ahan El Niño kadib, laakiin sida ku xusan diiwaanka taariikhda, fursaduhu way sii kordhayaan markii uu kani si gaar ah u xoog badnaa oo xoog badnaa, sidii ay ahayd waqtigan.
Raadadka duufaannada ee Badweynta Atlantik. Sawir - NASA.
Sida aan aragno, inkasta oo ay wax waliba ka bilowdaan meel cayiman oo meeraha ka mid ah, haddana run ahaantii waxay ku dambaysaa inay saameyn ku yeelato adduunka, iyadoo lagu soo saarayo dhammaan meelihii qaar isbeddello xagga cimilada ah oo aan la iska indho tiri karin. Waa inaad u diyaar garowdaa waxa iman kara, waa haddii ay dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » La Niña waxay imaan kartaa deyrta waxayna sababi kartaa qalalaase cimilo